လက်တွေ့ကျကျ အပစ်ရပ်ဖို့ အားနည်းချက်များ နားလည်သည်းခံဖို့လို ဟုဆို
jicm_1.jpg နေပြည်တော် Lake View ဟိုတယ်၌ နိုဝင်ဘာ ၁၇ နှင့် ၁၈ ရက်က ပြုလုပ်ခဲ့သော JICM ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်မှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကျင်းပစဉ်။ ဓာတ်ပုံ – စိုးသန်းလင်း နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ တစ်နိုင်ငံလုံး အမှန်တကယ် လက်တွေ့ကျကျ အပစ်အခတ်.
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သူရဦးရွှေမန်း တွေ့
ဓာတ်ပုံ – စိုးသန်းလင်း နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၉ ယနေ့ နံနက် ၉ နာရီတွင် အနိုင်ရပါတီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းတို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ရုံးခန်းတွင် တွေ့ဆုံကြသည်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ် အကောင်အထည်ဖော်ရေး၊ အမျိုးသား ရင်ကြားစေ့.
မိုင်းနောင်တွင် ပစ်ခတ်ခံရသူနှစ်ဦး အောင်ပန်းစစ်ဆေးရုံတွင် ကုသမှုခံနေ
aung_ban_hospital.jpg ဓာတ်ပုံ – သူရိန်ရွှေ အောင်ပန်း၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း မိုင်းနောင်တွင် အစိုးရတပ်နှင့် ရှမ်းပြည်တပ်မတော် မြောက်ပိုင်း (SSA-N)တို့ တိုက်ပွဲများ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အရပ်သားများ ဒဏ်ရာရ၊ သေဆုံးမှုများ ရှိနေပြီး အချို့ကို စစ်ဆေးရုံတွင် တပ်မတော်က ခေါ်ယူ ကုသနေသည်။ အောက်တိုဘာ.
ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လက်ခံခွင့်အာဏာ တိုင်း/ ပြည်နယ်အစိုးရတို့ကို ခွဲဝေမည်
နေပြည်တော်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၈ ပြည်ထောင်စုနှင့် အချိုးညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေလိုသည့် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရကသာ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော ပြည်တွင်းပြည်ပ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရတို့က လက်ခံဆောင်ရွက်ခွင့်ရနိုင်ရန် ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းကို ယနေ့ပြည်သူ့လွှတ်တော် ၁၃ ကြိမ်မြောက် အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့တွင် အမျိုးသား စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ဒုတိယဝန်ကြီး.
Breaking News, အထူးကဏ္ဍ, ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ
ရွေး/ကော်က ကြေညာရန် စုစုပေါင်းအမတ် ၁၁ ဦးသာ ကျန်ရှိ
ညနေ ၄ နာရီ ရွေး/ကော်ထုတ်ပြန်ချက်အရ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်လွှတ်တော်များတွင် ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှလွဲ၍ NLD ပါတီက အမတ်ဦးရေ အများဆုံး ရရှိကာ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ် အစိုးရများ ဖွဲ့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ရှမ်းနှင့် ရခိုင်တို့တွင်မူ SNLD နှင့်လည်းကောင်း၊ ANP နှင့်လည်းကောင်း နှစ်ပါတီစီ ပေါင်းပြီး.